laacibfm.com » AKHRISO: Messi, Ronaldo Illaa Pogba Iyo Mbappe – Shax Cajiib Ah Oo Laga Sameeyey Laacibiinta Uu Arsene Wenger Ku Dhowaaday Inuu Heshiis La Saxeexdo Oo Ay Arsenal U Ciyaaraan
AKHRISO: Messi, Ronaldo Illaa Pogba Iyo Mbappe – Shax Cajiib Ah Oo Laga Sameeyey Laacibiinta Uu Arsene Wenger Ku Dhowaaday Inuu Heshiis La Saxeexdo Oo Ay Arsenal U Ciyaaraan
Yaa iska celin kari lahaa Arsenal oo haysata, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Mbappe, Pogba, Bale iyo Kente?
Jawaabtu maaha mid waqti qaadanaysa, waxaana hubaal ah in iska dhaaf Arsenal ah e, haddii koox heerka labaad ah ay intani iskugu tagaan ay ku qaadi lahaayeen horyaalka Premier League, Champions League iyo koob kasta oo lagu tartamayo, isla markaana ay laf dhuun-gashay ku noqon lahaayeen kooxaha lacagta badan haysta ee Manchester United, Chelsea iyo Manchester City, halka Liverpoon na aanay hawaysateen inay ka baxdo abaarta 30ka sannadood horyaalka Premier League ka haysatay.
22 Sannadood oo uu Arsene Wenger joogay Arsenal, waxa uu dhisay koox magac leh oo la yaqaano, waxaana uu keenay ciyaartooyo waaweyn oo iyagoon hal mar laga badinin ku guuleystay Premier League, iskana yeeshay FA Cup oo uu u noqday kooxda muddooyinkii dambe sida joogtada ah ugu guuleysanaysay.
Arsene Wenger waxa muddadii uu Emirates iyo Highbury joogay uu ku dhowaaday inuu Arsenal keeno ciyaartooyda waqtigan dunida laga dambeeyo sida Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo haddii uu hal tallaabo hore u qaadi lahaa, ay hubaal tahay inay xidhan lahaayeen funaanadda Arsenal oo ay Gunners xilligan ku faani lahayd koobabka ay ku guuleysteen.
Markii uu Wenger keenay Arsenal, Thierry Henry, Roberto Pires, Igors Stepanovs iyo laacibiin kale, guud ahaan sawirka naadiga ayaa isbeddelay, laakiin waxa aan iyaguna ka fogaanin inay dariiqaas soo maraan xiddigo ay hormood u yihiin Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shax layaab leh oo laga sameeyey ciyaartoygii uu Arsene Wenger ku dhowaaday heshiiskooda ee sida fudud farihiisa uga baxay.
Goolka: Gianluigi Buffon
Markii uu Gianluigi Buffon 20 jirka ahaa ee uu u ciyaarayay kooxda Parma ee waddanka Talyaaniga, waxa ay miiska wada hadalka iskugu yimaaddeen Arsene Wenger oo ay hal habeen wada casheeyeen, waxaanay ka wada hadleen sidii uu uga mid noqon lahaa ciyaartoyga Arsenal.
Waqtigan oo ahayd sannadkii 1998-kii, Arsene Wenger kuma qancin Buffon inuu qalinka ugu duugo heshiiska, waxaana sidaas qiray goolhayaha Talyaaniga oo mar uu warbaahinta la hadlay sannadkii 2017kii yidhi: “Inta aan ogahay, waxa jiray saddex dalab oo dhab ahaa oo ka yimid kooxo Ingiriis ah oo ila soo xidhiidhay. Laba ka mid ah waxay yimaaddeen anigoo da’yar oo jooga Parma, waxaanan garanayaa Alex Ferguson iyo Arsene Wenger. Kaddib Manchester City.”
Buffon sannadkii 2001 ayuu noqday goolhayaha ugu qaalisan adduunka, waxaana £32 milyan ku iibsatay Juventus.
Difaaca: Raphael Varane
Wenger wuu niyad-jabay markii ay difaacan kaga guuleysatay Real Madrid sannadkii 2011, waxaana waqtigaas uu ruug-caddaaga Faransiisku kula jiray wada-hadallo, sidaana waxa qiray Varane oo sannadkii 2013 warbaahinta la hadlay.
Difaac: Vincent Kompany
Man City ayaa sannadkii 2008 la saxeexatay, laakiin waqti yar ka hor intii aanu sannadkii 2006 u wareegin Anderlecht, Wenger ayaa la hadlay, waxaanu isku dayay inuu heshiis la saxeexo.
:Jacques Lichtenstein oo ah wakiilka Kompany, ayaa arrintan xaqiijiyey, waxaanu yidhi: “Arsenal waxay xiisaynaysay Kompany, Wenger ayaana caddeeyey inuu doonayo inuu Kompany la saxeexdo si uu ugu beddelo Sol Campbell.”
Difaac: Gerard Pique
Markii Arsenal ay sannadkii 2003 heshiiska la saxeexanaysay Cesc Fabregas oo kulliyadda da’yarta ee Barcelona ku jiray, waxa kale oo ay doonaysay saaxiibkii Gerard Pique, laakiin si ay noqotayba Wenger kuma guuleysanin difaacan, waxaana sannadkii 2004 qaadatay Manchester United.
“Waxay ahayd waqti uu Fabregas yimid. Waxaanu doonaynay Fabregas, Lionel Messi iyo Pique. Mid ayuun baa noo shaqeeyey oo ah Fabregas.” Sidaas waxa qiray Wenger.
Dhexda: Gareth Bale
Wenger ayaa 2013-kii qirtay inuu qalad weyn sameeyey markii uu dayacay heshiiska Gareth Bale oo aanay wax badan ka xigin, waxaanu yidhi: “Maanaan soo qaadanin isaga maadaama aanu haysanay Ashley Cole iyo Gael Clichy, manaanaan rabin difaac bidix oo kale. Waa qasab inaan qiro inaan sameeyey qalad weyn maadaama uu sidoo kale dhexda ka ciyaarayay. Wuxuu ku dhibaatooday inuu si fiican ula bilowdo Chelsea, kaddib waxay geeyeen dhexda, waxaanu muujiyey wax layaab leh. Mararka qaarkood, ciyaartoyga xirfaddiisu waxay ku xidhan tahay in laga ciyaarsiiyo booska saxda ah.” Sidaas waxa sannadkii 2013 yidhi Wenger.
Dhexda: Paul Pogba
Wenger ayaa 2014kii yidhi: “Ciyaartoy ahaan, wax walba ayuu ahaa. Way adkayd in la tilmaami karo wax aanu haysanin. Si degdeg ah ayay arrimuhu u dhaceen. Waanu xiisaynaynay isaga, waxaanu isku daynay inuu yimaaddo Arsenal, laakiin si degdeg ah ayuu ula saxeexday Juventus 2012-kii. Wuxuu leeyahay sansaan uu ugu guuleysan karo Ballon d’Or.”
Dhexda: N’Golo Kante
Wenger iyo kooxdiisa Arsenal ba laba jeer ayay sameeyeen isku day ay kula soo saxeexanayeen xiddiga khadka dhexe ee Chelsea, waxaana sidaas caddeeyey Arsene Wenger sannadkii 2017-kii.
“Waxaan isku dayay inaan lasoo saxeexdo markii uu joogay France iyo markii uu joogay Leicester ba. Wax walba ma sharrixi karno, iibku waa iib, laakiin waxbaa kuu caddaanaya marka aad eegto halka uu tegay.” Ayuu yidhi Wenger, waxaanu raaciyey: “Waxaan rumaysanahay in Kante uu saamayn weyn lahaa. Maaha wax kusoo beegmay halka ay Chelsea joogto iyo wixii ay Leicester samaysay xili ciyaareedkii hore.”
Dhexda: Jadon Sancho
Horraantii sannadkan ayuu Wenger sheegay inuu isku dayay inuu lasoo saxeexdo laacibkan kooxaha oo dhan ay hadda raadinayaan, waxaanu yidhi: “Waxaan isku dayay inaan kasoo qaato Man City markii aan xataa hal ciyaar la safaynin. Waxaan isku dayay inaan soo qalqaaliyo sababtoo ah wuxuu kasoo jeedaa London. Waxaan isku dayay inaan keeno Arsenal. Waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan ee jiilkiisa.:
Weerarka: Kylian Mbappe
Wenger waxa uu sheegay inuu isku-dayga saxeexa Kylian Mbappe bilaabay horraanta sannadkii 2016, xilligaas oo aanay cidina aqoonin, isla markaana aanu sidii mucjisada ahayd ugu soo bixin Monaco.
Weerarka: Lionel Messi
Wenger waxa uu si cad u sheegay inuu Barcelona kala xaajooday sidii uu u qaadan lahaa Lionel Messi xilligii uu Fabregas ka iibsanayay, waxaanu yidhi: “Waxaanu kala xaajoonaynay Messi markii aanu iibsanaynay Fabregas, sababtoo ah Messi isaga ayuu la ciyaarayay. Pique iyo Fabregas waxay yimaaddeen England, Messi na wuxuu joogay Spain. Waanu xiisaynaynay heshiiskiisa, laakiin wuxuu ahaa mid aan la taaban karaynin waqtigaas.”
Weerarka: Cristiano Ronaldo
Xiddiga reer Portugal ayaa qiray inuu hal tallaabo u jirsaday inuu ku biiro Arsenal oo uu jeclaa ka hor intii aanu Manchester United heshiiska u saxeexin sannadkii 2003.
“Aad ayaan ugu dhowaa. Hal tallaabo ayaan jiray runtii.” Ayuu yidhi Ronaldo oo la hadlayay khabiirka ciyaaraha Piers Morgan.
Ronaldo oo kasii hadlaya arrintan waxa uu yidhi: “May dhicin, laakiin Arsenal waxaan qiimeeyaa wixii ay sameeyeen, khaasatan Arsene Wenger. Kubadda cagta ma garan karaysid halka aad ka ciyaarayso, noloshuna waa sidaas oo kale.”
Si kastaba ha ahaatee, 11-kan ciyaartoy ee uu Arsene Wenger isku dayay inuu keeno Arsenal ee aanu ku guuleysanin, waxay kooxdan ka dhigi lahaayeen mid aan la qiyaasi karaynin sida ay hadda u ekaan lahayd, haddii saxeexyadaas lagu guuleysan lahaa.
Difaaca: Gerard Pique, Raphael Varane, Vincent Kompany
Dhexda: Paul Pogba, Gareth Bale, N’Golo Kante, Sancho
Weerarka: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe